कथा विरकोः विरको अर्थ बहादुर ! – Social Service Centre (SOSEC), Nepal
कथा विरकोः विरको अर्थ बहादुर !
बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुप्रतिको रुढिबादि सोचहरुलाई छिचोल्दै
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु शारिरीक र मानसिक अपाङ्गताका कारण जिवन भरी समस्या त भोग्नु नै पर्ने हुन्छ तर समाजको मानसिकताले पनि यि बालबालिकाहरु पिडामा नुन र्खुसानी छरेको हुन्छ । उनीहरुले आफना सबै आशा ,सपना र्बिसर्न बाध्य हुन्छन्। नेपालको दुर्गम ठाउँका विधालयहरुमा समावेशी शिक्षाको व्यवस्था छैन , त्यसैले उनीहरुले आधारभुत शिक्षामा पनि पहुँच पाउँदैनन । “अपाङ्गता पूर्व जन्मको पाप हो, यसले केही गर्न सक्दैन, यो परिवारको लागि बोझ मात्र हो, यसलाई पढाएर काम छैन , यस्तै रुढिबादि सोचहरुलाई भने १५ वर्षिय विर वहादुरले छिचोल्दै अघि बढेका छन् र आफना आमा बुवालाई गौरभान्वित बनाएका छन् ।
विर वहादुर जन्मदेखि नै बहुअपाङ्गता भई जन्मेका थिए । १५ वर्ष भइसक्दा पनि उनको मानसिक विकास हुन सकेको छैन । उनको माथिल्लो ओठ जन्मदेखि फाटेको भएकोले उनको बोलि पनि स्पष्ट छैन । उनी शारिरीक रुपमा पनि एकदमै कमजोर छन् । उनलाइृ कक्षा १ मा दुर्गा देवि मा.वि, पुलियामा भर्ना गरिएको थियो तर उनलाई शारिरीक कमजोरीका कारणले गर्दा पहाडको ३० मिनेटको बाटो हिँड्न धौ धौ पर्दथ्यो । विधालयमा पनि अन्य बालबालिकाहरुले जिस्काउने र उनी अरु बालबालिका सरह सिक्न नसक्ने हुँदा उनले विधालय जान छोडे । “ लखनाउमा २ वर्षको हुँदा उसको अपरेशन गरेको हो । मेरो छोराको मुटु सानो भएकोले डाक्टरले धेरै बाँच्दैनन भनेका छन्” गहभरि आँसु राख्दै भन्दछन्, धनसिँह बुढा ,विरका बुवा । धनसिँह बुढा र उनकी श्रिमति गुराँस गाउँपालिकामा बसोबास गर्दे आएका साना किसान हुन । उनका विर सहित ३ जना सन्तान छन् । खेतिकिसानी तथा सिजन नभएको बेला भारतमा गरेको ज्याला मजदुरी नै यस परिवारको मुख्य आयस्रोत हो ।
धनसिँहलाई विरको पहिला धेरै चिन्ता लाग्ने गरेको र विरलाई लिएर उनले सबै आश मारिसकेको उनले बताए । तर अहिलेको समयमा विरमा आएको परिवर्तन साँच्चै नै सराहनिय छ । यसले साँच्चै नै विरजस्तै अन्य बालबालिकालाई ठूलो प्रेरण मिल्न सक्दछ । विरले अहिले कक्षा २ को अन्तिम परीक्षा तृतिय श्रेणीमा उक्तिर्ण गरेका छैन । तर उनी विधालय भने जाँदैनन । उनी अहिले सामाजिक सेवा केन्द र सोसेक नेपाल दैलेखको साझेदारीमा संचालित सहयात्रा दोस्रो परियोजना अन्र्तगतको घरमै विधालय कार्यक्रम अन्र्तग सहजकर्ताको सहयोगमा घरमै अध्ध्यन गरेका छन् । यस अन्र्तगत उनी सन २०१९ देखि घरमै अध्ययन गर्दे आएका हुन् । अपाङ्गता भएका बालिबालिकाहरु जो विधालयसम्म पुग्न सक्दैनन उनीहरुको आधारभुत शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि परियोजना अन्र्तगत यो कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । यसमा एक जना बहुअपाङ्गता भएका बालक अथवा बालिकालाई घरमै तािलम प्राप्त एक शिक्षकले विभिन्न सिकाई तथा खेल सामाग्री प्रयोग बालबालिकाहरुलाई सिकाउने पढाउने गर्दछन्। यो कक्षा शनिबार र संस्थाले दिएको अन्य सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक, दैनिक ४ घण्टा संचालन हुने गर्दछ विरजस्तै अन्य ४ जना बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु पनि यस्तै कक्षा अन्र्तग घरमै बसेर अध्ध्यन गरिरहेका छन् । यस कक्षमा सहजकर्ताले बालबालिकाको सिकाई मात्र नभएर, उनीहरुको सकारात्मक बानि व्यवाहारको विकास गर्न पनि मदत गर्दछन् । विर जो नचिनेको मान्छेसँग कुरा गर्देनथे, चिडचिडापन देखाउँथे, अहिले उनलाई भेट्न आउने जो कोहिलाई पनि मुस्कानका साथ नमस्कार गर्ने गर्दछन् । उनी आफनो सरसफाई प्रति ध्यान दिने गर्दछन् र सफा कपडा लगाउन मन पराउँछन् । “ मेरो शिक्षकले म हराउन सक्छु भनेर मलाई घरको ठेगाना र बुवाको मोबाइल नम्बर पनि याद गर्न सिकाएका छन् “ मन्द मुस्कानका साथ विर भन्छन् । २ कक्षा पास भएर ३ कक्षामा जान पाउँदा विर अत्यन्तै खुसी छन् ।
सुरुसुरुमा विर कक्षामा बस्न मान्दैन थिए । कक्षाका सहजकर्तालाई चिर्थाेने, गाली गर्ने, रुने कराउने गर्देथे । कक्षाका सहजकर्ता दु«पता खत्री भनिछन् “मलाई अहिले पनि याद छ त्यो सुरुको दिन मैले सायद विरलाई सिकाउन सक्दिन कि जस्तो लागेको थियो तर अहिले उनी कक्षामा एकदमै रमाउँछन् । मेरो लागि यो कुनै सफलता भन्दा कम होइन”। विर विहानको ८ वजेदेखि ११ बजेसम्म कक्षामा पढ्ने गर्दछन् । उनको कक्षाको समिक्षा मासिक रुपमा उनको विधालय र वडामा हुने गर्दछ । वडाका जनप्रतिनिधिहरु, वडा बाल अधिकार समितिका सदस्यहरु त्था सहयात्रा परियोजनाका सहयात्रीहरु पनि अनुगमनमा आई कक्षालाई अझ बढि प्रभाविकारी बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन् ।
९ असार २०७८, बुधबार १६:०६
Breaking the stereotype regarding children with multiple disabilities Children with disabilities have to face lifelong challenges followed by their physical and mental disabilities. In addition to it, these children have to set back all their dreams and hopes for the future due to the narrow perception of society towards them […]